Hotely New W no nandraisanao Centerstage tao RUNWAY, Manazava ny tanàna ary mandehandeha ambonin'ny volana, any Changsha ihany.
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Hotely New W no nandraisanao Centerstage tao RUNWAY, Manazava ny tanàna ary mandehandeha ambonin'ny volana, any Changsha ihany.
Vaovao Mafana China • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao
"W Changsha no manamarika ny hotely fahavalo W izay hosokafana any Shina, iray amin'ireo tsena manan-kery indrindra amin'ny fizahan-tany sy amin'ny asa aman-draharaha, ary faly izahay hitondra ny W Hotels amin'ny toerana maro kokoa manerana ny firenena," hoy i Tom Jarrold, Global Brand Leader, W Hotels Maneran-tany. “Ireo tanàna toa an'i Changsha, miaraka amin'ireo mponina mifantoka amin'ny ho avy sy tsena mihaja mandavantaona maniry haingana ny vaovao sy tsy ampoizina, dia kianja filalaovan'i W.”
Ny hoavin'ireo hotely vao nisokatra izao.
W Hotels Worldwide dia vonona hanazava ny renivohitra sy ny tanàna lehibe indrindra ao amin'ny faritanin'i Hunan, Sina, miaraka amin'ny fanokafana an'i W Changsha.
An'ny Vondron-indostria Hunan Yunda, W Changsha, ny trano fandraisam-bahiny dia maneho ny toe-tsaina mamirapiratra avy amin'ny tanàna futuristic sy multi-dimensional miaraka amina endrika mihantsy sy milalao aingam-panahy avy amin'ny dia an-habakabaka.
Mora azo, W Changsha dia ao anatin'ny 30 minitra mankany amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Changsha Huanghua, 15 minitra mankany amin'ny Changsha South Railway Station, ary mifandray mivantana amin'ny lalambe Beijing-Hong Kong-Macau Expressway. Noforonina avy amin'ny Cheng Chung Design (HK) Ltd, W Changsha, no tandindonin-doza amin'ny endrika endrika vaovao sahisahy mankalaza ny lova sy ny maoderina an'i Changsha. Any Chine, Changsha dia fantatra ihany koa amin'ny hoe "Star City" ary ny anarany no manome aingam-panahy ny fitantaran'ny hotely misy endrika maodely feno fahasahiana mifangaro amin'ny sary avant-garde ankehitriny. Notendren'ny hotely manokana, ny kanto mahavariana toa ny andiany Schrodinger's Cat sy ny fametrahana zavakanto Zeta dia mizaha ny zava-miafina an'izao rehetra izao amin'ny alàlan'ny solomaso W, ka miteraka fihaonana tsy ampoizina manerana ny hotely.
Rehefa tonga tao W Changsha, ny vahiny dia arahabaina ny sary famantarana W, manazava mba hitovy amin'ny taratry ny volana. “Avenue of the Stars”, tontolo haino aman-jery mifangaro mitambatra kanto, fifanakalozan-kevitra ary zava-kanto amin'ny feo, dia mampita ny vahiny mankany RUNWAY, bara fitadiavana ao amin'ny Living Room, ny sonian'ny marika, ny fihodinan'ny fiaraha-monina eo amin'ny lobby hotely nentim-paharazana. Eto, ny sary vongana “Pepper Man” dia manasa ny vahiny hijery sy ho talanjona amin'ny zava-mahatalanjona eny amin'ny habakabaka ao anatin'ny tontolon'ny fomba amam-panao sy kolontsaina Changsha any an-toerana.
W Changsha Fahatongavana, efitrano fandraisam-bahiny, LALANA
Ny efitrano sy efitrano fandraisam-bahiny misy hotely 345 ao amin'ny hotely dia manolotra haitraitra maoderina sy fanamorana teknolojia vaovao, miaraka amin'ny rindrina mampiseho planeta, antokon-kintana, ary fahitana ny nebulae amin'ny alàlan'ny efijery LED “meow eye cab” izay maka tahaka ny fikarohana eny amin'ny habakabaka. Manomboka amin'ny 26th rihana mankany amin'ny rihana avo indrindra amin'ny 28th, ny Extreme-tantara Extreme - WOW Suite (ny fandraisan'ny marika ny suite filoham-pirenena) dia mihoatra ny 1,000 metatra toradroa ny velarana sy ny fialamboly, ao anatin'izany ny zaridaina manokana sy ny dobo filomanosana, hanaovana toerana mamirapiratra ho an'ny hetsika manokana nohamafisin'i serivisy fanaovana sonia ny hotely.
W Changsha dia nampanantena fa izy no ho toeram-pisakafoanana vaovao indrindra ho an'ny sakafo any an-toerana miaraka amina trano fisakafoanana telo sy bara fitodiana. TROPICS, trano fisakafoanana mandritra ny tontolo andro ao amin'ny hotely, dia manome traikefa manitrika miaraka amin'ny lakozia malalaka misokatra manolotra sakafo eo an-toerana sy iraisam-pirenena. SHINN YEN mankalaza ny kolontsain'i Changsha amin'ny alàlan'ny fisakafoanana sy zava-kanto, miaraka amin'ny fomba fiasa mavitrika amin'ny sakafo Hunanese eo an-toerana izay mampiseho ny tsiro manitra any amin'ny faritra. Isaky ny hariva, fampisehoana cabaret mivantana iray mampihetsi-po namboarina tamina opera nentin-drazana Hunan dia manome lanja ny traikefa fisakafoanana. Amin'ny alina, RUNWAY no toeram-pisotroana hotely hipetrahan'ny vahiny rehetra eo afovoany hijerena sy hahitana azy ireo. Ny jirony dia mirehitra miaraka amin'ny fampisehoana mozika mampirongatra izay mifangaro tanteraka amin'ny cocktails vita tanana sy manaikitra maivana.
Namirapiratra tao W Changsha ny hetsika
Miaraka amin'ny habaka maherin'ny 1,000 metatra toradroa amin'ny efitrano fiasana miisa dimy, W Changsha dia manome safidy tsy manam-petra amin'ny fampiantranoana asa sy fiaraha-mikorana. Ao amin'ny foyer, sary sokitra graffiti sy pop art "Fist Bump" - ny fanehoam-pankasitrahana iraisampirenena - no miandry ny vahiny rehefa mivory alohan'ny fotoam-panahy. Ny efitrano fivoriana rehetra dia misy multifunctional ary manana ny haitao farany audiovisual mifanaraka amin'ny takian'ny hetsika manokana. Ao anelanelan'ny fivoriana dia afaka miala sasatra miaraka amin'i W Recess ny vahiny, fialan-tsasatry ny hotely am-piandohana amin'ny fisotroana zava-pisotro sy sakafo isan-karazany natao hanandratana ny hetsika rehetra.
DETOX. RETOX. Avereno.
Rehefa avy niasa na nilalao dia afaka miverina miverina eo akaikin'ny dobo fisaintsainana ny vahiny na manao famafazana ao amin'ny WET®, dobo mivelatra misy sary sokitra 'Space Cat' telo metatra. Ny ivon-toeram-panatanjahan-tena FIT miasa 24/7, feno fitaovana dia manome lanja sy kardio ary koa kilasy fandihizana mandratra fo handoro kaloria alohan'ny hanombohan'ny fankalazana indray. Ho an'ireo vahiny miaina ny filozofia marika 'Detox.Retox.Repeat', AWAY SPA dia miandry ny famerenana amin'ny laoniny sy hamelomana ny famirapiratan'izy ireo.
"Faly izahay fa hanomboka ny marika W Hotels any afovoan'i Sina ary hanamarika dingana hafa iray an'ohatra ho anay rehefa manohy manitatra ny portfolio-ntsika ho lasa tsena vaovao manerana ny firenena," hoy i Henry Lee, filoham-pirenena, Greater China, Marriott International. “Rehefa mitohy mitazona fiakarana goavana ny dia an-trano dia mitondra marika vaovao sy manaitaitra toa W any amin'ny toerana fialam-boly misandratra eto amin'ny firenena izahay.”
Raha mila fampahalalana bebe kokoa na hanao famandrihana dia tsidiho wchangsha.com.